» पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन ,जेष्ठ १८ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ? हेर्नुहोस राशिफल ॐ ॐ पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन ,जेष्ठ १८ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ? हेर्नुहोस राशिफल ॐ ॐ – हाम्रो खबर
पाथिभरा माताले हामी सबैको रक्षा गरुन ,जेष्ठ १८ गते मंगलबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ? हेर्नुहोस राशिफल ॐ ॐ
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय त्यति उत्तम रहेको छैन । म’ध्यान पश्चात मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । अध्यन अध्यापनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ । मान्यजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्य हरु सम्पादित रहनेछन ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) यात्रा कारक समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सा’मना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्रशन्न रहनेछ । सामाजिक कार्यमा जुट्ने समय रहेकोछ । मानसम्मान प्राप्तीको योग रहेकोछ । सवारि साधनको प्रयोमा ध्यान पूर्याउनु होला ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । बौधिक ब्यत्तित्व हरुको साथ सहयोगमा आर्थिक क्षेत्र सवल बन्ने सम्भाबना रहेकोछ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाशमा जु’ट्ने समय रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । अनावश्यक खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । खानपानको गडबढिका कारण स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मध्यान पश्चात कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । नजीकका ब्यत्तित्वहरुबाट धोका हुनाले कार्य सम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नेछ ।-ओएसनेपाल बाट